October 2, 2020 – Xorriya Online
Madaxweynaha maamulka Puntland oo ka hadlay jawdwalka ee laga soo saaray doorashooyinka dalka
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu ka hadlay jadwalka doorashooyinka dalka ee la soo saaray. Madaxweyne Deni ayaa waxa uu tilmaamay in hadda aysan jirin cabsi fara badan oo uu sheegay in uu ka qabay arimaha doorashooyinka ee dalka. Shir jaraa’iid oo uu maanta ku qabtay madaxweyne Deni garoonka Aadan Cade ee […]
Kenya oo diiday inay dalkeeda ka dhacaan duqeymaha dhanka ah Alshabaab
Madaxweynaha dalka Kenya Uhurru Kenyatta oo wareysi dheer ah siiyay warbaahinta France24, ayaa waxa uu sheegay in uusan ogolaan doonin in milatariga Mareykanka ay duqeymo cirka ah ka geystaan gudaha Kenya, isagoo beeniyay wararka sheegayay in Aqalka Pentagon-ka uu oggolaasho weydiistay Kenya. Wargeyska New York Times ayaa bishii la soo dhaafay shaaciyay in milatariga Mareykanka […]
Labo caruur walaalo ah oo ku geeriyootay ceel biyood ku yaala Laascaanood
Laba carruur oo walaalo ah ayaa geeriyootay kadib markii ay ku dhaceen meel Biyo ku jiraan oo lagu dabaasho , taas oo ku taalla magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Halka ay ku dabaalanayeen caruurta ayaa markii hore ku dhacay mid kamid ah Carruurta, balse kan kale oo doonayay in uu badbaadiyo walaalkiis uu isagana ku […]
Dowlada fedraalka Soomaaliya oo shaacisay in xubno muhiim ah oo ka tirsan Alshabaab ay hawlgal ku dishay
Ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo howlgal qorsheysan ka fuliyay degaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegay in ay ku dileen xubno muhiim ahaa oo ka tirsan Alshabaab. Howlgalka ayaa ka dhacay duleedka degaanka Bariire ee gobolka Shabellada Hoose waxayna ciidanka xooga dalka ku dileen madaxii hoobiyaasha Alshabaab u qaabilsanaa gobolka iyo dagaalamayaaal badan oo […]
Midowga Yurub oo markale Turkiga ugu hanjabey in ay Saari doonaan cunaqabateyn adag
Wadamada ku bohoobey Midowga Yurub ayaa markale Turkiga ugu hanjabey in ay saari doonaan, cunaqabateyn adag, haddii aaney Xukuumadda Ankara Joojin sida ay hadalka u dhigeen gardarrada uu ku hayso qaybo kamid ah dhulka Giriiga. Af hayeen u hadley Midowga ayaa hadalkani waxaa uu ka sheegey shir hoggaamiyaasha Yurub ay ku yeesheen xarunta Brussels iyaga […]
Ciidamada Booliska Galmudug oo howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaano ka tirsan Galgaduud
Ciidamada booliska Gaarka ah ee haramcad oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay howlgallo ka wadaan degaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo ay ku sugna yihiin xubno ka tirsan ururka Alshabaab. Howlgalka ayaa waxaa ay sigaar ah ciidamada uga fuliyeen degaannada Ceel Garas iyo God dhurwaa oo dhamaantood Hoos taga degmada […]
France oo ku eedeysay Turkey inay sii hurinayaan dagaalka u dhaxeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia
France ayaa ku eedeysay Turkey inay calooshood u shaqeystayaal Suuriyaan ah u dirtay si ay uga qeyb qaataan dagaalka gobolka Nagorno Karabakh ee u dhaxeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia. Turkey waa ay beenisay inay maleeshiyaad u dirtay dagaalka.France, Russia iyo Mareykanka ayaa wada maamula ururka amniga iyo wada shaqeynta ee OSCE ama loo yaqaan Minsk […]
Madaxweynaha Mareykanka oo shaaciyay in laga helay cudurka Covid19
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay in laga helay cudurka Covid19. Madaxweynaha ayaa sheegay in isaga iyo marwada koobaad ee dalkaasi laga helay cudurka ayna bilaabeen inay iskarantiilaan sidoo kalana ay mari doonaan habkii ay cudurkaasi uga soo kabsan lahaayeen. Arrintan ayaa timid kaddib markii mid ka mid ah lataliyaashiisa aadka ugu […]
Shuruudaha laga rabo musharaxiinta u tartamaya labada aqal ee Baarlamaanka fedraalka Soomaaliya
Kulankii xarunta madaxtooyada Somalia uga socday madaxda dowlada federaalka iyo madax goboleedyada ayaa lagu go’aamiyey jadwalka doorashada dalka ka dhaceysa iyo shuruudaha laga rabo musharixiinta Hooska akhriso shuruudaha laga rabo musharaxiinta u tartamaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka: In uu yahay muwaadin Jamuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Dhimirkiisu u dhan yahay Da’diisu ka yarayn 25 sano Aan […]
Dowlada fedraalka Soomaaliya oo sheegtay inuu isa soo dhiibay sarkaal Alshhabaab ka tirsan
Wararka aanu ka heleeno gobolka Bakool ayaa ku soo waramaya in halkaasi lagu soo bandhigay sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa Alshabaab. Sarkaalkan ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowlada Soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool Waxaana magaciisa lagu sheegay Aadan Cabdow Xareed Taliyaha ururka 51 ee guutada sagaalaad Deyrow macalin Cabdi iyo taliyaha qeybta booliska […]